Asa any ivelany : harafitra ny tondrozotra | NewsMada
Asa any ivelany : harafitra ny tondrozotra
Nahatratra 18 volana ny namolavolana ireo hevitra rehetra handrindrana ny fandefasana mpiasa any ivelany izay niarahana tamin’ny OIM sy ny minisiteran’ny Fampianarana teknika sy ny fampananana asa ary ny fampiofanana momba ny asa.
Mandrafitra izany volavolan-kevitra izany ny ekipa teknika avy amin’ny minisitera maromaro ho lasa tondrozotra ampiharina amin’ny fandefasana mpiasa any ivelany sy ho fiarovana azy ireo indrindra indrindra.
“Apetraka ireo fepetra samihafa miantoka ny fiarovana ireo mpila ravinahitra any ivelany ireo” hoy ny tale jeneralin’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika, Rabearivelo Noelison. Anisan’ny vinavinaina ny fidiran’izy ireo amin’ny Cnaps hahafahany misitraka ny tombontsoa rehetra amin’izany.
Tanjona ny fitsinjovana ny sosialin’ireny olona miondrana any ivelany ireny mba tena hisy tombony ho azy sy ny fianakaviany ny asa alehany any.
Hatramin’izao, manamafy ny minisitera fa tsy mbola misy ny fandefasana mpiasa any ivelany. Mbola arahi-maso akaiky ireo orinasa mpandefa mpiasa na efa nahafeno ny antontan-taratasy ilaina aza.
Mbola mandeha ny fifampidinihana amin’ireo firenena mpandray mpiasa malagasy mba hisian’ny fifanarahana mazava.
Na izany aza, tsikaritra mbola misy ireo orinasa mandefa mpiasa an-tsokosoko any ivelany toy ireny tratra teny Ivato ireny.